सन्दीपको ५० विकेट : कुन लिगमा कति ? « Janata Samachar
सन्दीपको ५० विकेट : कुन लिगमा कति ?
प्रकाशित मिति : चैत्र २५, २०७५ सोमबार
काठमाडौं । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा ५० विकेट पूरा गरेका छन् । इंडियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटको आइतबार भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरका खेलाडी मोइन अलीलाई रिसव पन्तबाट स्टम्पिङ गराउँदै सन्दीपले आफ्नो ५० विकेट पुरा गरेका हुन् ।
सन्दीपले विभिन्न ६ फ्रेन्चाइज टी–ट्वान्टी लिग खेल्दै ४० खेलमा ५० विकेट लिएका हुन् । सन्दीपले ८ सय ६० बल बलिङ गरेर १ हजार रन दिँदा ५० विकेट हात पारेका हुन् । यसरी बलिङ गर्दा उनको इकोनोमी ७ दशमलव ९७ रहेको छ ।
सन्दीपको सबैभन्दा उत्कृष्ट बलिङ पाकिस्तान सुपर लिगमा देखिएको थियो । पाकिस्तान सुपर लिगमा लाहोर कलेन्दर्सबाट खेलेका उनले ४ ओभरमा १० रन दिदैँ ३४ विकेट लिएका थिए ।
कुन लिगमा कति विकेट ?
पछिल्लो एक वर्ष अत्यन्त ब्यस्त बनेका सन्दीपले विश्वका चर्चित लिगहरु खेल्ने अवसर पाए । आईपीएल २०१८ मा सहभागी भएका सन्दीपले त्यसपछि क्यारेबियन प्रिमियर लिग, बिग बास लिग, ग्लोबल टी–ट्वान्टी, अफगानस्तान प्रिमियर लिग र पाकिस्तान प्रिमियर लिग जस्ता टी–ट्वान्टी फरम्याटका खेलहरु खेलेका थिए ।
आईपीइल २०१८ – ३ खेलमा ५ विकेट
अफगानस्तान प्रिमियर लिग – ५ खेल ६ विकेट
क्यारेवियन प्रिमियर लिग – ५ खेल ७ विकेट
बिग बास लिग – ८ खेल ११ विकेट
बंगलादेश प्रिमियर लिग – ६ खेल ४ विकेट
पाकिस्तान प्रिमियर लिग – ७ खेल ११ विकेट
आईपीएल २०१९ – ४ खेल ५ विकेट
जारी खेलमा टस जितेर पहिले बलिङ गरिरहेका नेपालका लागि करण केसीले पहिलो विकेट लिएका छन्
त्रिदेशीय टी-ट्वान्टी : नेपाल र मलेसिया भिड्दै
काठमाडौं । त्रिदेशीय टी-ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजमा आज नेपालले मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । त्रिवि क्रिकेट मैदान